काठमाडौं १४, मंसिर । नारायणी लामिछाने । तपाई सार्वजनिक पार्किङ स्थलमा कार पार्किङ गर्दै हुनुहन्छ ? होस गर्नुहोस्, ट्राफिक प्रहरीको ह्रिलरले तपाईको कार वाध्ने छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जथाभावी कार तथा ट्याक्सी पार्किङ व्यवस्थापनका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ । यदि नियमको पालना नभएमा वा जथाभावी पार्किङ गरेको पाइएमा ट्राफिक प्रहरीले तपाईको लाइसेन्स माग्छ र ठाँउका ठाँउ रु. १ हजारको चिट थमाउछ । यदि कारवाला नभेटिए तपाईको कार ह्रिइलर फन्दामा पर्ने छ । शुक्रबार चावहिल मेडिकेयर अगाडि ४/५ ओटा कार ह्रिइलरले बाधिएका थिए । चावहिल चोकका प्रहरी दयाराम खतिवडा भन्छन् ‘ यो नियमबारे थाहा नभएर जथाभावी पार्किङ भइरहेको छ, तर नियम लागू भएपछि सुधार भने भएको छ ।’
महानगरीय टा«फिक प्रहरी कार्यालय काठमाडौले २ हप्ता अघिदेखि यो व्यवस्था लागू गरेको थियो । अव्यवस्थित पार्किङ गरिएका कार तथा ट्याक्सीको लक फुकाउन सवारी धनीले रू. १ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने र धनी नआएमा ग्लोबल आईएमई बैँकमा गएर रकम डिपोजिट गरेपछि मात्र गाडी फिर्ता पाइन्छ ।
राजधानीमा बढिरहेको अव्यवस्थित पार्किङ तथा निर्वाचनको समयमा हुने गरेको जथाभावी पार्किङलाई मध्यनजर गर्दै महानगरले यस्तो अभियान थालेको हो । यस अभियान पश्चात मानिसहरुमा केही चेतना वढेको र अव्यवस्थित पार्किङ घटेको महानगरिए ट्राफिक कार्यालयको भनाइ रहेका छ । अव्यवस्थित पार्किङले पैदल यात्री आवतजावतमा समस्या हुने र दुर्घटना निम्तिने गरेको छ ।
प्रकाशित १४ मङ्गसिर २0७४ , बिहिबार | 2017-11-30 01:22:01